Alfa Dayz mbanye anataghị ikike ats Ndị aghụghọ, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
Alpha Dayz mbanye anataghị ikike
Iji DayZ Alfa mbanye anataghị ikike anyị bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụzọ ekwesiri iji chọta ihe ịga nke ọma na egwuregwu a.
Chọrọ inwe mmetụta ọ dịka ịchị ndị iro gị? Zụta Ihe Ngwaahịa -bọchị 1!
Ọ bụrụ n’ịchọ ka ihe anyị ga - enye, nweta ohere maka ogologo oge! Zụta Ngwaahịa Ngwa Izu 1!
Mgbe ụfọdụ ị ga-ararara onwe gị nye na ọrụ nke hacking. Purzụta igodo ọnụ ahịa ọnwa 1!
Enwere otutu mgbanwe na-aga nke ọma
n'oge gị DayZ ahụmahụ, na iji anyị DayZ Alfa mbanye anataghị ikike na-aga na-amachi nsogbu ị na-abịa gafee. Ma ọ bụ zombies ma ọ bụ ezigbo egwuregwu, iji ngwa anyị ga - echekwa gị.
DayZ Alpha mbanye anataghị ikike Ozi
DayZ Alfa Hack a kachasị kachasị iji jeere gị ozi, n'agbanyeghị ihe ịchọrọ enyemaka. Nke a mbanye anataghị ikike na-abịa n'ụzọ zuru ezu kernel na atụmatụ a GDI menu, na-enye gị a ezigbo na kachasị hacking ahụmahụ na bụla egwuregwu. Ọ bụ ezie na DayZ Alpha a ga-abịa HWID ekpochi, ị nwere ike ịzụta HWID spoofer n'aka anyị ebe a na Gamepron! Chọghị ịhapụ ihe niile na ohere na egwuregwu dị ka DayZ, ebe ọ bụ nlanarị nke ike kacha ike - bụrụ nwoke ikpeazụ (ma ọ bụ nwanyị!) Na-eguzo site na iji DayZ Alpha Hack anyị iji nọrọ n'ihu.
Nke a DayZ mbanye anataghị ikike abịa onwem na ọtụtụ DayZ Wallhack atụmatụ, dị ka Iro ESP (Skeleton ESP), Iro Iro (Anya, Zombies), na ọbụna Loot ESP! The DayZ Alpha Aimbot gụnyere Distance Aimbot Distance, yana FOV Circle na Silent Mode; o nwere ihe nile ichoro ime nke oma.
Onye Iro ESP (Ọkpụkpụ)
Ozi Iro (Anya, Zombies)
Loot ESP (anya; ngwa agha)
Dozie Aimbot Anya
Kemeghi Aimbot FOV
Banyere DayZ Alfa
DayZ bụ egwuregwu lanarị nke enwere ike igwu naanị ya ma ọ bụ jiri ndị enyi ole na ole, ọ bụ gị ka ọ dị n'aka. Mbanye anataghị ikike dị mfe iji ma ihe niile ị ga - eme bụ ịgbanye mbanye anataghị ikike, gbaa egwuregwu gị, hazie ntọala, wee kpọọ! Pụrụ ọbụna ịhọrọ strimụ na a eji Aghọ Aghụghọ Ule arụ ọrụ, dị ka ndị na-ekiri gị agaghị enwe ihe ngosipụta ihe na-eme; ọ bụ kpam kpam Mpụga aghụghọ na-apụghị na-egwuri na ihuenyo. Ga-enwerịrị nchedo nkwarụ ka ị na-eji DayZ Alpha, ma ọ bụghị na ọ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma. Zuru oke maka mgbe ịchọrọ inweta ịdị ukwuu na DayZ.
Gini mere iji jiri DayZ Alpha kari ndi ozo?
Ugboro ole ka ị zụtara DayZ Mbanye anataghị ikike, naanị ịghọta na ị tufuru ego gị? Gaghị enweta ngwaahịa na-enweghị isi mgbe ị zụrụ ihe na Gamepron, o doro anya na ndị ọrụ anyị nwere ekele maka eziokwu ahụ! Ga-enwerịrị ohere iji nweta atụmatụ kacha mma nke DayZ mbanye anataghị ikike na Gamepron, anyị na-enyekwa gị mgbanwe site na ịnye nhọrọ oge ole na ole. Achọpụtaghị aghụghọ anyị, yabụ enweghị mkpa ịjụ ma ọ bụrụ na akaụntụ gị nọ n'ihe egwu ka ị na-eji DayZ Hacks!
Bụ onye okike nke akara aka gị ebe a na Gamepron, dị ka menu egwuregwu anyị dị mfe ọfụma ị ga-ahụ n'ịntanetị. Imirikiti hacks ga-amanye gị ịme mgbanwe na ntọala gị tupu ịmalite egwuregwu ahụ, nke pụtara na ị meghere egwuregwu ahụ, ịlaghachi azụ! Obi dị m ụtọ, Gamepron agbanweela ihe niile - ọ bụghị naanị na ị nwere ike ịme mgbanwe mgbe ị na-egwu egwu, mana menu egwuregwu anyị nwekwara nhọrọ karịa ị ga-ahụ na ọdịnala DayZ Hack. Gbanwee ọsọ nke Aimbot gị, mpaghara ndị ịchọrọ ịche, ma ọ bụ ọbụlagodi nhọrọ ESP gị.
A5. Mba, aghụghọ a anaghị agụnye hwid spoofer. Anyị na-enye hwid spoofer dị iche iche maka Dayz
A6. No, a otu adịghị arụ ọrụ na ihuenyo.
Chọta ihe kachasị mma n'iji DayZ Alpha ESP anyị, ma ọ bụ naanị wepụ ndị iro gị ngwa ngwa site na ime ka anyị nwee ntụkwasị obi DayZ Aimbot. GamePron nwere ihe niile ịchọrọ!
Excel na mpi na nke kacha mma egwuregwu gburugburu iji DayZ Alpha mbanye anataghị ikike!
Njikere Na-achị na anyị Dayz Alfa Hack?